Mogadishu Journal » Pochettino ayaa amaanay ‘ciyaaryahanka ugu fiican adduunka’ Messi ka dib goolkii ugu horreeyay ee PSG
Pochettino ayaa amaanay ‘ciyaaryahanka ugu fiican adduunka’ Messi ka dib goolkii ugu horreeyay ee PSG
Tababaraha kooxda Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ayaa sheegay in uusan shaki ku jirin in Lionel Messi uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka ka dib markii uu goolkiisii ​​ugu horreeyay u dhaliyay kooxda reer France kulankii ay Talaadadii ka badiyeen Manchester City.
PSG ayaa 2-0 ku dhaaftay kooxda heysata horyaalka Premier League ee City garoonkeeda Parc des Princes, iyadoo Idrissa Gueye uu furay gooldhalinta daqiiqadii sideedaad ka hor inta uusan Messi guushu ku raacsaneyn goolka daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta.
Goolkan ayaa ahaa goolkii ugu horeeyay ee Messi ee midabada PSG ee kulankiisii ​​afraad tan iyo markii uu si xor ah uga soo wareegay kooxda awooda badan ee LaLiga ee Barcelona.
Messi ayaa ka goolal badan Champions League kooxda City (7) in ka badan ciyaaryahan kasta, halka toddobadii gool ee uu ka dhaliyay kooxaha uu maamulo Pep Guardiola (labo ka mid ah Bayern Munich, shan isaga oo City ah isaga oo tababare ah) sidoo kale waa xiddiga ugu badan taariikhda tartanka.
Dhanka kale, Messi ayaa 27 gool oo Champions League ah ka dhaliyay kooxaha Ingariiska - waana in ka badan 15 ciyaaryahan oo kale. Kaliya Cristiano Ronaldo ayaa goolal badan ka dhaliyay kooxaha ka soo horjeeda qaran gaar ah (28, kooxaha Jarmalka) taariikhda Champions League.
“Waxaan u maleynayaa inay ahayd wax cajiib ah, qaab ciyaareedkiisa,” Pochettino ayaa u sheegay BT Sport. “Wuxuuna dhaliyay gool cajiib ah.
“Waa ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, taas shaki kuma jiro, dabcan, [waan ku faraxsanahay] inaan arko isagoo muujinaya kubbadiisa.
“Isaga iyo kooxda oo dhami si dhab ah ayay u shaqeeyeen, runtii aad bay u adkayd si loo gaaro guushaas.
PSG ayaa soo raacday tirakoobkii ugu muhiimsanaa, iyadoo City ay ku dhacday 18-6 darbo iyo 7-3 darbo oo bartilmaameed ah, laakiin Pochettino ayaa ku farxay sida ay kooxdiisa uga go’antahay difaaca.
Messi ayaa si isku dhafan Kylian Mbappe u dhaliyay goolkiisa, taasoo ka yaabisay Pochettino kaasoo carrabka ku adkeeyay in xiriirkooda weerarka iyo Neymar ay weli yihiin “shaqo socota”.
“Waan sameyn karnaa, waxay muujiyeen inaan dooneyno inaan midowno, inaan wada shaqeyno,” ayuu yiri Pochettino. “Tayadu way jirtaa, waxaan haysanaa tayo cajiib ah iyo ciyaartoy cajiib ah.
“Caqabadda ayaa ah in dhammaan ay u shaqeeyaan labada weji ee ciyaarta iyagoo leh awood isku mid ah si ay u dhibtoodaan. Caawa waxaan muujinnay caqiido aad u wanaagsan waxaanan bilaabay inaan arko kooxda wada shaqeyn karta, kaliya ma ahan hab weerar ah laakiin sidoo kale mid difaac ah. "
On Canal Plus, Pochettino wuxuu raaciyay: "Waxay ahaayeen xoog weyn oo kooxda ah, waxay raadinayeen inay ka mid noqdaan waaxda weerarka, kooxduna mar walba meel fiican ayay joogtay. Waxaan ku guuleysanay inaan ka baxno ku -meelgaarnimada."
Natiijadan ayaa u dhaqaajineysa PSG kaalinta koowaad ee Group A iyadoo leh afar dhibcood oo ay la socoto Club Brugge, oo 2-1 kaga badisay RB Leipzig, halka City ay ku jirto kaalinta seddexaad iyadoo leh seddex dhibcood.
Pochettino ayaa yiri: “Maanta waxay aheyd Champions League oo aan la ciyaarnay Manchester City, waan ogeyn inaan u baahanahay inaan muujino taas oo ah mid adag oo aan is caawino”.
Aqoonyahan Caan ah oo loo doortay Senator kadib doorasho adag oo dhacday